Vaovao - Fahasamihafana eo amin'ny Pipe Welded Wire sy Pipe Welded Welded
Ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fantsom-pandrefesana roa an'ny fantsom-boaloboka atsofoka sy ny fantsom-pandrefesana mahitsy dia ny fahasamihafana amin'ny endrika welding.
Ny fantsom-pandrefesana spiraly dia vy vy mirafitra karbonika ambany na fantsom-by vy mirindra ambany mihodina anaty fantsom-batana misy zoro helix iray (antsoina koa hoe zoro), ary avy eo nofehezina ary namboarina tamina fantsom-pifandraisana, izay afaka mampiasa tsipika tery vy Famokarana fantsom-by vy lehibe. Ny fantsom-pandrefesana spiraly dia fantsom-pandrefesana arofanina (SSAW), izay matetika ampiasaina amin'ny fananganana fantson-tsolika isan-karazany any Shina. Ny miavaka dia asehon'ny "savaivony ivelany * hatevin'ny rindrina". Ny fantsom-boaloboka mihosin-tsivana dia soloina amin'ny lafiny tokana ary mifamatotra amin'ny lafiny roa. Ny fantsom-boaloboka dia mihazona fa ny fitsapana hydraulic sy ny tanjaka amam-pahefana ary ny fihenan'ny hatsiaka mangatsiaka dia mifanaraka amin'ny fitsipika.
Ny fantsom-pantsaka voaforona mahitsy dia ankehitriny avo lenta ary dingana iray eo akaikin'ny vokatra azo avy amin'ny solder layer alohan'ny hamoronana ny welding, ary ny sisin'ny fantsom-pohy dia mafana sy miempo ary mifangaro. eo ambanin'ny hery manery iray, mamolavola famolavolana. Ny fantsom-pandrefesana mahitsy avo lenta dia ampiasaina izay manondraka ny sisin'ny fantsom-pohy amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny haingam-pandeha (ERW), izay antsoina hoe fantsom-boaloboka arofanina (LSAW) mihosin-tsofina amin'ny alàlan'ny fandotoana amin'ny andohalambo elektrika.
Ny tanjaky ny fantsom-pandrefesana miolakolaka dia mazàna avo kokoa noho ny an'ny fantsom-piraikitra mahitsy. Ny fizotry ny famokarana lehibe dia ny welding vy. Ny fantsom-pandrefesana miolika dia afaka mamokatra fantsona voaforona miaraka amin'ny savaivony fantsom-pahalalana mitovy habe amin'ny banga, ary afaka mamokatra fantsom-pahazo mifangaro miaraka amin'ny savaivony lehibe kokoa miaraka amin'ny banga tery.
Ny fizotry ny famokarana fantsom-boaloboka mahitsy dia somary tsotra, indrindra amin'ny dingam-pamokarana, izay mizara ho fantsom-pandrefesana fantsom-pandrefesana mihombo avo lenta ary fantsom-bokatra mihosin-tsofina. Ny fantsom-bozaka vita amin'ny kofehy mahitsy dia manana fahombiazan'ny famokarana avo lenta, vidiny ambany ary fampandrosoana haingana.
Na izany aza, raha ampitahaina amin'ny fantsom-pandrefesana fantsona mahitsy mitovy halava dia mitombo 30 ka hatramin'ny 100 ny halavany, ary ambany ny hafainganam-pamokarana. Noho izany, ny fantsom-pantsaka nohosorana savaivony kely kokoa dia ny lasitra mahitsy, raha ny fantsom-pantsaka matevina lehibe dia matevina mihodina.